Isazoqhubeka intuthuko ka-ward 80 eMlazi | Eyethu News
Isazoqhubeka intuthuko ka-ward 80 eMlazi
“Ngeke kuze kume intuthuko ngenxa yomakhalekhukwini abantshontshiwe ngingamane ngibathenge mina.”
IKHANSELA lakawadi 80 eMlazi, uMnuz Mthokozisi Nojiyeza uthembisa umphakathi ukuthi intuthuko iyaqhubeka yize kunezinkinga zokunganeliseki kwabantu nokubanjwa kwenkunzi osaveya benkontileka eyakha izindlu iZikhulise.
UNojiyeza usho lokhu ngesikhathi kuhlangene wamalunga omphakathi asezakhiweni zako 5 nako 6 kuso isigceme sakwa E, KwaShaka High School ngeSonto.
“Ngiyezwa abantu bethi bazwile kuthiwa ngeke kuqhubeke ukwakhiwa ngoba kubanjwe inkunzi kwaphucwa osaveya amafoni kodwa mina njengekhansela ngithi intuthuko iyaqhubeka,” kusho uMnuz Nojiyeza.
Ukhansela ushaye phansi ngonyawo wathi ngeke avume ukuthi kungama intuthuko ngenxa yeselula okungenani amane ayithenge yena ukuze abantu baqhubeke nokufakelwa intuthuko emphakathini.
Kulomhlangano kuvele okuningi nobekuyizingqinamba zokuletha intuthuko enye yazo ukungabikho kwendlela yokuxhumana phakathi komphakathi nekhansela obekudalwa ukungabikhona kwekomidi elimele umphakathi neligcine likhethiwe.
Abakhethiwe abayishumi kube uNokubonga Mpanza, uNdumiso Khumalo, uMavis Sosibo, uBusisiwe Zuma, uReginald Khumalo, uNosipho Radebe, uPatience Ndimande, uTerrence Cele noBusisiwe Dube.
Kulomhlangano bekukhona namaphoyisa eqaphe isimo ngezibhamu ezinkulu emagcekeni.
Obekhulumela amaphoyisa aseMlazi kube ngukapteni uMyeza ophinde wanxusa umphakathi ukuthi ungazithatheli umthetho ezandleni kodwa ubikele amaphoyisa uma kukhona onganeme ngakho, waphinde wanxusa ukuthi umphakathi usebenzisane namaphoyisa ukubamba izigebengu.
“Akekho umuntu ozile wazovula icala kuthina mayelana nokubamba inkunzi kuthathwa ifoni kodwa siyanxusa ukuthi ningathuli umanibona ubugebengu emphathini,” kusho ukapteni Myeza
BUKA: Intsha igubha usuku ngokukhethekile eMlazi